Enye yemigaqo ephambili yokulahlekelwa isisindo kukuba ukungavumi ukutya iiyure ezimbalwa ngaphambi kokulala. Nangona kunjalo, kunzima kakhulu ukuyigcina. Mhlawumbi udidi olulodwa lwabesetyhini abanokukwazi ukulufumana - abafazi. Emva koko, baninzi ixesha lokupheka isidlo ngexesha kwaye badle.
Ziyintoni na abo baqhelanisekileyo kunye nabahlaseli bokubala ubunzima abasebenza emsebenzini kunye nekhaya bafika ngo-8 ntambama nangemva koko? Musa ukusila isidlo sakusihlwa! Oku kuphelisa kuphela impilo yakho kwaye akuvumeli ukuba ulahlekelwe isisindo. Izondlo zicebisa ngokuchanekileyo ukuseka ukutya. Imenyu kufuneka ifake ubuncinane ama-5 okutya, okwakutshanje okungekho ngaphezu kweeyure ezingama-2 ngaphambi kokulala. Nangona kunjalo, ukutya kokuhlwa kufuneka kube:
Indlela yokugcina imigaqo yesondlo esifanelekileyo kwaye ungaziqhubeki kwisondlo esingqongqo?
Imixube yezinto ezidliwayo kumntu olinganiswe kakuhle
Ngombulelo kwimveliso ekhethekileyo yokutya yendalo unokukwazi ukuzihlawula rhoqo ngokuhlwa kunye nezitsha ezintsha ngaphandle kokwesaba ukuba umzo kunye nempilo. Isisombululo esihle kakhulu kukusetyenziswa kwemixube yokutya "FitParad". Inxalenye ephambili yemixube ilungiswa kumgubo okhethekileyo wengqolowa, oveliswa ngokusanhlamvu okucocekileyo kwendalo kwimihlaba ye-Altai Territory. Isici esiyingqayizivele semingxube kukuba zidalwe zisebenzisa ubuchwepheshe bokutshaya. Le ndlela yokuvelisa ayifuni ukuhlunga kwaye ivumela ukugcina yonke ixabiso kunye nokusetyenziswa kocwangco lwe -leuron, i-embryo kunye negobolondo ye-cereal.
"FitParad" ibonisa ukusetyenziswa komgubo ukusuka:
imbewu ye plantain;
Eyona nto ilungiselelwe iteknoloji ekhethekileyo, umxube uya kuba lula kakhulu ukulungiselela ukutya okulula kunye nokuncedisayo. Kuzo, unokulungiselela ice cream ecolileyo, evunyelwe ukuba idle kunye neDucane yokutya, kunye ne-aircake, i-casseroles, i-curd, iigca, isinkwa se pizza kunye ne-bran. Umgca wemixube ekhethekileyo esuka kwi "FitParad" iquka ukulungiselela i-cookies, i-cookies, i-pancake kunye nezinye izinto ezibhaka nge-bran.
Isitishi somshukela we-bioorganic
Ukuxinezeleka, uxinzelelo oluqhubekayo, ukuxubusha, isidingo esingunaphakade sokuya kwindawo ethile, umsebenzi omningi emsebenzini - konke oku kukhokelela ekubeni ukuba kusihlwa umntu uphelelwe ngamandla kwaye akhathala. Ukubuyisela amandla nokubuyisela amandla, kudla ngokwaneleyo ukusela itiye elimnandi. Nangona kunjalo, akuqhelekanga ukutya ukutshabalalisa zonke izicwangciso: ushukela unyanqatshelwe. Jabulela kusihlwa iziphuzo ezinoncoko ezimnandi ngaphandle kokulimaza kumntu kwaye impilo ingakwazi. Ngenxa yeso sizathu soshukela "FitParad", esakhiwe ngokweteknoloji entsha, ifanelekile. Iswekile e-Bioorganic ikude nokokuthi ngokuqhelekileyo kuthiwa ukufa okumhlophe. Indawo yokutya iswekile yanamhlanje ikhuselekile ngexesha lokutya kwaye ingabhubhisi ukwanda komzimba.
Indawo ethatha iswekile esuka kwi "FitParad" ayifanelekanga kuphela kulabo bathetha ukulahlekelwa isisindo. Sebenzisa isizukulwana esitsha soshukela esikhundleni sabantu abaye bahlushwa isifo, i-arrhythmia, i-heart attack, i-hypertension nezinye izifo, apho kucetyiswa ukunciphisa inani leesekese ezisetyenzisiweyo. Iswekile ye-bioorganic ikuvumela ukuba unciphise uxinzelelo oluqhubekayo ekuphuculeni ubunzima. Iyakulungele ngokufanelekileyo abemi beidolophu ezinkulu, imihla ngemihla ejongene nezinto ezingento, isandi, isihlwele. Kubo, ubumnandi buba yinduduzo encinci kunye nokunyanga koxinzelelo. Kwaye oku akuyona ingozi yetshukela, eneempembelelo ezininzi, kodwa ukubunjwa kwanamhlanje akukhokeli kwiikhilogram ezingaphezulu.
Pastila ngaphandle kweshukela - isipho esimnandi ngexesha lokutya
Pastila ngaphandle kweshukela - esinye esinye isisombululo esikhulu sokuhlwaya. Ukuba isidlo esipheleleyo sasisesikhathini esifanelekileyo, kwaye ngaphambi kokulala, ufuna into enomnandi, kunzima ukuziphika. Emva kwakho konke, akukude ukuhluleka, xa kunokuba nayiphi na into inokuya kudlala, ngokuqala ngeebhalethi ze-chocolate kunye nokuphela nge-cutlets kunye namazambane adibeneyo.
Ukuze ukwanelise indlala kwaye ngexesha elifanayo uzibandakanye ngobumnandi kunokwenzeka ngoncedo lwe-pastille engavamile ukusuka kwi "FitParad". Into ekhethekileyo yale mveliso kukuba:
ukungabikho kweswekile ekubunjweni;
Ungasebenzisa i-pastille engavumelekanga nakweliphi na isigaba seDucane. Kwi-100 gram yobumnandi iqukethe i-75.3 kcal, evumela ukuba ujabulele ukunambitha okumnandi, ngaphandle kokucinga ngengozi kwimpilo kunye nokuqokelela ngokukhawuleza kobunzima obukhulu.
Imixube yokutya yokubhaka
Kukho ubusuku ngokuhlwa kwaye ungadli mafutha kunye nokuxuba ukupheka. Ukubunjwa kwabo kusebenza ngokugqithiseleyo ngabachwephesha bokutya. Izithako ezisetyenzisiweyo zidibeneyo ukwenzela ukuba unyango lubondla. Yingakho ingafakwa ekudleni kunye nokwehla kwesisindo. Inkampani ethi "FitParad" inikeza iintlobo ezininzi zeemveliso kule fomethi:
Iintlobo zeentlobo zemixube zijolise ekulungiseni ngokukhawuleza kwekhekhe le-meringue ngokuthabatha okuthile. Ukubunjwa okwenziweyo kwenza ukuba kube lula ukulula "nobusuku baseSwitzerland", okuya kuba ngumphumo obalaseleyo kumhla onzima. Ukuzonwabisa ngokutya emva kwe-18.00 eyaziwayo, awukwazi ukuzihlambalaza kwaye ungabonakali ubuthathaka.
Ikhekhe ilungele ukutya kokutya, kuba umxube wokulungiselela awunalo iswekile. Ubumnandi bunikwa kwi-dessert prebiotic inulin, i-stevia, i-erythritol, ifakwe kumxube we-meringue edumileyo.
Ukutya kunye neengqungquthela zendalo
Nangona kunjalo, kungekhona nje imiphunga iya kuxabisa imveliso evela kwi "FitParad". Ngobusuku ungadla ngokumnandi, uzonambitha isobho. Iisobho ezinokuthi zinokukunceda ukwanelise indlala ngaphandle kokulimaza inani. Kulohlu lweesitya zokuqala kukho iintlobo ezinjalo:
Nganye yesobho i-dietary. Ixabiso lamandla - kuphela 329 kcal ngalinye nge-100 g - likuvumela ukuba ufake imveliso kwimenyu yokuhlwa.
Kuyathakazelisa ukuba ukutya kungabisi ebisiweyo ebisiweyo, kunye nesiraphu esiphumileyo, kunye neziqhamo zityalo. Kwiziko le-www.fitparade.ru unokufumana ezinye izinto ezininzi ezincedo kunye neekhalori ezenzelwe imidlalo kunye nesondlo esifanelekileyo.
Ioli yeoliva: inzuzo kunye nengozi
Impawu ezinobungozi zenyama yenkukhu
U-Natalia Podolskaya wabonakala kuqala kwisigaba emva kokuzala
Umfanekiso kunye nesitayela somfazi weshishini
U-Ivan Urgant wahleka eFedor Bondarchuk, ifoto
Indlela yokumazi indoda ekhompyutheni
Ndingu-freelancer okanye indlela yokushiya ngokupheleleyo iofisi
Umphefumlo wempuphu kunye nobusi
Indlela yokudala nokuvula i shishini lakho?